परदेशीको यथार्थ पिडामा तयार पारीएको गीत “ए परदेशी फर्क” गीतको भिडियो सार्बजनिक::kamananews
परदेशीको यथार्थ पिडामा तयार पारीएको गीत “ए परदेशी फर्क” गीतको भिडियो सार्बजनिक
नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैं नजिकीएसंगै दशैं तिहार सम्बन्धि गीतहरु बजारमा आउने क्रम बढ्दो छ ।
यसै अवसरको सिर्जना गरी परदेशको दुख पिडामा समावेस गीतको भिडियो कामना डिजिटल प्रा.लि ले बजारमा ल्याएको छ।
श्रीमान् परदेशमा दुख कष्ट गरेको र श्रीमतीले घरमा बसेर बिलौना गरेको कथा वस्तु लाई गीतले समेटेको छ। डिल्ली काफ्लेको लय सिर्जना रहेको यो गितमा शब्द आचल विरही रानाको रहेको छ भने स्वर चर्चित गायिका पूर्ण कला बि सी , डिल्ली काफ्ले र सागर बस्नेतको रहेको छ।
गीतको भिडियो पनि निकै उत्कृस्ट बनेको छ। चर्चित मोडल ऋचा थापा र देब राज काफ्लेको अभिनय रहेको यो भिडियोको निर्देशन बिक्रम चौहानले गरेका हुन् भने सम्पादन प्रकाश खड्काले गरेका छन् । त्यसै गरि भिडियोको सम्पादन भने मिलन बि क ले गरेका हुन्।
दैनिक दुई हजारको अनुपातमा परदेशिने र घरमा रहेका बुढा बाबु आमा श्रीमती छोरा छोरी र गरिबीको पिडा संग परदेसिएको आफ्नो मान्छे चाड वाड नजिक आउदा घर आउने आशमा बसिरहेको बिषय बस्तु लाई बडो मार्मिक्ताका साथ् भिडियोमा प्रस्तृत गरिएको छ। भिडियोमा अभिनय गर्ने देव राज काफ्ले नेपाल प्रहरी संगठनका ईनिक्सपेक्टर हुन्।
कामना न्युज डट कम संग कुरा गर्दै मोडल देव राज काफ्ले ले भने मेरो अभिनय गर्ने सोख बच्चै देखिको हो, व्यस्तताका बाबजुत पनि पछिल्लो समयमा आफुले सकेजति नेपालि सांगीतिक क्षेत्रमा आफ्नो योगदान निरन्तर दिने बताए। गायक डील्ली काफ्ले र गायक सागर बस्नेत यी दुवै पनि नेपाल प्रहरी संगठनमै कार्यरत छन् ।
मनोरंजन बाट अन्य
प्रभाससँग भएका पाँच सर्वाधिक महँगा बस्तुहरू,जीमखानकै डेढ करोड भारू !
तेलेगु सुपरस्टार प्रभासले सन् २००० मा ‘एश्वर’ सिनेमाबाट डेब्यू गर्दै आफ्नो सिनेमा यात्रा सुरू गरेका थिए। सन् २०१५ मा रिलिज भएको ‘बाहुबली’ सिनेमाले उनलाई भारतभर र भारतीय सिनेमाका पारखी दर्शकहरूमाझ बृहत चर्चा दिलायो। आज यी...
मलाइका र अर्जुनको ‘अफेयर’ले सलमानलाई किन टाउको दुखाइ ?
नयाँदिल्ली : अभिनेत्री मलाइका अरोरा र अर्जुन कपुरको ‘अफेयर’ले यतिबेला बलिउड बजार तातेको छ । दुबैजना केही समययता डिनर, पार्टी लगायत सार्वजनिक कार्यक्रममा संगै देखिँदैआएका छन् । अर्का अभिनेता सलमान खानलाई भने उनीहरुको निकटता चित्त...
निर्मलाका हत्यारा नपक्रने, होटलमा बसेका जोडी किन पक्रने ? प्रहरीलाई ज्योति मगरको प्रश्न,
लोक गायिका ज्योती मगरले प्रहरीले होटलमा बसेका जोडीलाई बिनासित्ती पक्रेको भन्दै प्रहरीमाथि आक्रोश पोखेकी छिन। ठूलाबडाले ठूला-ठूला तारे होटलमा मोज मस्ती गर्दा नपक्रने तर सामान्य जोडीलाई पक्रने गरेको भन्दै उनले प्रहरीमाथि व्यंग्य गरेकी हुन्।...
महेश बाबूको जोडी बन्दै कट्रिना केफ !
बलिउड अभिनेत्री कट्रिना केफका वर्ष २०१८ मा २ वटा फिल्महरु रिलिज भएका थिए । फिल्म ‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’ मा अभिनेता आमिर खानका साथ र अर्को फिल्म ‘जीरो’ मा अभिनेता शाहरुख खानका साथ कट्रिनाले स्क्रिन...
राजकुमार हिरानीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप !
बलिउडमा ‘मि टू’को प्रकरण हाबी छ । केहि समय अगाडि चर्किएको यो अभियान विचमा सिथिल बनेको थियो । अब, फेरि यो प्रकरण चर्किज थालेको छ । आइतबार बलिउडका सफल निर्देशक राजकुमार हिरानीमाथि उनीसँगै काम...
‘सिरियल किसर’इमरान हाश्मी चुम्बनको प्रश्नले किन दिक्क छन् ?
नायक इमरान हाश्मीको नाम सुन्ने वित्तिकै दर्शकको दिमागमा उनले चुम्बन गरेका चलचित्रको याद आउँछ । यसैले, इमरानलाई बलिउडका ‘सिरियल किसर’को उपमा समेत दिइएको छ । तर, नायक हाश्मीले बलिउडमा अन्य थुप्रै चलचित्रमा पनि काम...
लामो समयदेखि प्रेममा रहेको जोडी नायिका बर्षा राउत र नायक संजोग कोइरालाले भ्यालेन्टाइन डेको दिनमा बिहे गर्ने भएका छन् । यो जोडीले केही समयदेखि बिहेको तयारी समेत गरेको थियो । नायिका बर्षा राउतले आफूहरुले बिहे...
६ जनासँगको अफेयरपछि विवाह
मुम्बई : बलिउडकी अभिनेत्री विपाशा वसुले ७ जनवरीमा आफ्नो ३९औं जन्मदिन मनाएकी छन्। विपाशा फिल्ममा आउनुभन्दा पहिले सुपर मोडल थिइन्। विपाशालाई हरर फिल्मका लागि स्मरण गरिन्छ। अहिलेसम्म विपाशाले धेरै हरर फिल्ममा काम गरेकी छन्।...
तोडफोड भएपछि रोकियो ‘द एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर’को शो
शुक्रबारदेखि रिलिज भएको चलचित्र ‘द एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर’को शो रद्द भएको छ । कोलकक्ताको हलमा विरोध प्रदर्शन तथा तोडफोड भएपछि उक्त चलचित्रको शो रोकिएको हो । यो चलचित्र पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको जीवनीमा आधारित...
देशभर मल्टिप्लेक्स नै मल्टिप्लेक्स, टार्गेट भाटभटेनी
चलचित्र हेर्ने दर्शकले अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न हलको खोजी गर्न थालेपछि अहिले हल संचालकहरु वाध्य भएर आफ्नो हलको पूर्ननिर्माणमा लागेका छन् । साथमा, अहिले मल्टिप्लेक्स हल निर्माणमा समेत बाढी आएको छ । अहिले देशभर मल्टिप्लेक्स हल...